Qarax saaka ka dhacay degmada Afgooye & faahfaahino ka soo baxaya khasaaraha ka dhashay!! | kowtharmedia.com
Home WARAR Qarax saaka ka dhacay degmada Afgooye & faahfaahino ka soo baxaya khasaaraha ka dhashay!!
Qarax saaka ka dhacay degmada Afgooye & faahfaahino ka soo baxaya khasaaraha ka dhashay!!
Jan 24, 2017WARAR
Ugu yaraan shan askari oo ka tirsan ciidamada dowlada ayaa ku naf waayey, qaar kalena wey ku dhaawacmeen ka dib qarax miino oo saaka ka dhacay degmada Afgooye ee gobolka Sh/hoose.
Qaraxan ayey wararku sheegayaan in loo adeegsaday miino xoogagii -shabaab ee shalay galab soo weeraray degmadaas ay ku aaseen goob ay fariistaan ciidanka dowlada, ka hor inta aysan xalay halkaas ka bixin.
Goob joogayaal ayaa sheegaya in saaka markii ay halkaas tageen askar ka tirsan ciidamada dowlada lagu qarxiyey miinadii loogu sii aasay xalay.
Dhinaca kale, faahfaahino ayaa ka soo baxaya khasaaraja ka dhashay dagaalkii shalay galab illaa xalay fiidnimadii ku dhexmaray degmadaas ciidamada dowlada & xoogaga mintidiinta -shabaab ee halkaas sooo weeraray.
Ugu yaraan 8 ruux oo isugu jira ciidamada Dowladda, Al-Shabaab iyo dad shacab ah ayaa ku dhintay dagaalkaas sida ay sheegayaan warar madax banaan oo degmadaas laga helayo.
Maamulka degmada Afgooye ayaa sheegay in xoogagii mintidiinta -shabaab ee shalay degmadaas soo galay ay dad Rayid ah u geysteen dil iyo dhaawac.
Xabiibo Cali oo ka mid aheyd ganacsatada degmada Afgooye ayuu maamulka degmadaas sheegay in lagu dhex dilay beerteeda oo ku taalla Afgooye.
-shabaab ayaa dhankooda waxay sheegayaan iney muddo saacado ah la wareegeen degmada Afgooye ayna dagaalkii halkaas ku qaadeen ku laayeen askar badan oo ka tirsan ciidamada dowlada.
Gudoomiyaha Degmada Afgooye ayaa sheegay in weerarada U sabab yihiin wabbiga oo Guray waxaana meesha ka baxay uu dhahay Difaac awel saarnaay mintidiinta shabaab dhanka kale wuxuu Dowlada Soomaaliya ku ee deeyay Wadda shaqayn la aan in ee ku hayso Afgooye.
Previous PostDAAWO: Xildhibaanada Soomaaliya oo Wacad ku maray inay Xorayn doonaan VILLA Soomaaliya iyo Hanjabaadii Itoobiya!! Next PostQaybtii Labaad ee Sidee loo tigsadaa nolol dhab ah? Ciwaanada buuga wuxuu ka kooban yahay 27!!